प्रदेश–५ः सिकलसेल एनिमियाबाट थारू समुदायको आधा जनसंख्या प्रभावित
रिपोर्ट विहीबार, साउन १०, २०७५
प्रदेश–५ सरकारले हालै गराएको अध्ययनबाट यो प्रदेशका थारू समुदायको आधाभन्दा बढी जनसंख्या सिकलसेल एनिमियाबाट प्रभावित भएको पाइएको छ ।
लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको साँघुरो कुनामा सञ्चालित सिकलसेल परीक्षण गर्ने मेशीन । तस्वीरः दीपक ज्ञवाली
नेपालमा अहिलेसम्म सिकलसेल थारू समुदायमा मात्रै देखिएको छ । यो रोगको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा सञ्चालनमा आउनुअघि प्रदेश–५ को भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्जमा मात्रै थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरी भन्छन्, “आजसम्म यो रोगको परीक्षण नहुँदा कति जना पीडित भए, रोग पत्ता नलाग्दा कति जनाको घरबार सकियो जस्ता थारू समुदायको पीडा सार्वजनिक हुनै बाँकी छ ।” सिकलसेलका बिरामीलाई अस्पतालमा निःशुल्क औषधि दिइने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म रोग पत्ता लगाउने प्रविधिको अभावमा अधिकांश अस्पतालबाट बिरामीले त्यस्तो सेवा लिनसकेका छैनन् ।
थारू समुदायको सघन बसोबास रहेको प्रदेश–५ को आधाभन्दा बढी थारू जनसंख्या सिकलसेल एनिमियाबाट प्रभावित रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डा. चौधरी बताउँछन् ।
सिकलसेलः पश्चिम तराईको रोग
मन्त्रालयले स्वास्थ्य महाशाखाका कविराज निरीक्षक गणेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ८ असारमा गठन गरेको अध्ययन टोलीले थारू बहुल प्रदेशका ६ वटै जिल्लामा अध्ययन सकेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ ।
अध्ययन अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु गरी ६ जिल्लामा सिकलसेल एनिमियाकोे समस्या देखिएको छ । यी ६ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमण बाँके, बर्दिया र दाङमा छ । सिकलसेल एनिमियाको समस्या समाधानमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनवटै सरकारबीच समन्वय हुनु जरूरी रहेको डा. चौधरी बताउँछन् ।
चिकित्सकहरूका अनुसार सिकलसेल एनिमिया रक्तकोषमा आउने समस्या हो । वंशाणुगत कारणले हुने यो रोग मलेरिया प्रभावित क्षेत्रका मानिसमा बढी देखिन्छ । सिकलसेल एनिमिया भएपछि गोलो आकारमा हुने रक्तकोष हँसिया (सिकल) आकारको बन्छ । यो रोग आमाबाबु दुवैमा भए सन्तानमा पनि देखिने धेरै सम्भावना हुन्छ ।
व्यक्ति अनुसार फरक–फरक लक्षण देखिने भए पनि सिकलसेल भएमा सबैभन्दा पहिले रक्तअल्पता हुन्छ र स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन थाल्छ । नेपालका थारू समुदायमा मात्रै देखिएको भनिए पनि विस्तारै अन्यमा समेत यो रोग फैलिन सक्ने डा. चौधरीको भनाइ छ ।